တာချီလိတ်၌ တရုတ်နိုင်ငံသား နှစ်ဦးထံမှ လိပ်ကြက်တူရွေး ၈၅၀ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်မြို့၊ ဝမ်ကောင်းရပ်ကွက် အားခေရွာရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင် အနံ့အသက်ဆိုးများ ထွက်နေကြောင်း သတင်းပေး တိုင်ကြားချက်အရ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး မွေးမြူထားသည့် လိပ်ကြက်တူရွေး(၈၅၃)ကောင်အား စစ်ဆေးတွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
သတင်းအရ အားခေးရွာမှနေအိမ်သို့ နိုဝင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ နေ့လယ်(၂)နာရီခွဲဝန်းကျင်က တာချီလိတ်မြို့နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနမှာ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ဝမ်ကောင်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့ဖြင့် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရာ FRC No.1 –YGN-41660 ကိုင်ဆောင်သူ Mr.D Guoqiang (Passport No. E-42523300) (၂၆/၂၀၁၆) နှင့် FRC No.1-YGN-41660 ကိုင်ဆောင်သူ Mrs.Lipeixin ( Passport No. E 72273391) (၂၀/၂၀၁၆)တို့ နှစ်ဦးအား တရားမဝင် မွေးမြူထားသည့် လိပ်ကြက်တူရွေးများအား တွေ့ရှိရသဖြင့် အရေးယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဖမ်းဆီးရမိသော လိပ်ကြက်တူရွေးများအား တာချီလိတ်မြို့နယ် သစ်တောဦးစီးဌာနရုံးတွင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားပြီး ဘေးမဲ့ပြန်လည်လွှတ်ပေးသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား တရားမဝင် မွေးမြူထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးအား တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝပင်များကာကွယ်ရေး သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇(က)ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူနိုင်ရန် တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းက ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
တာခြီလိတျမွို့၊ ဝမျကောငျးရပျကှကျ အားခရှောရှိ အိမျတဈအိမျတှငျ အနံ့အသကျဆိုးမြား ထှကျနကွေောငျး သတငျးပေး တိုငျကွားခကျြအရ တာဝနျရှိသူမြား သှားရောကျစဈဆေးရာ တရုတျနိုငျငံသားနှဈဦး မှေးမွူထားသညျ့ လိပျကွကျတူရှေး(၈၅၃)ကောငျအား စဈဆေးတှရှေိ့ရကွောငျး သိရသညျ။
သတငျးအရ အားခေးရှာမှနအေိမျသို့ နိုဝငျဘာလ(၂)ရကျနေ့ နလေ့ယျ(၂)နာရီခှဲဝနျးကငျြက တာခြီလိတျမွို့နယျသဈတောဦးစီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ အမြိုးသားမှတျပုံတငျဦးစီးဌာနမှာ တာဝနျရှိ သူမြား၊ ဝမျကောငျးရပျကှကျအုပျခြုပျရေးမှူး၊ ပွညျသူ့စဈအဖှဲ့တို့မှ တာဝနျရှိသူမြား ပါဝငျသညျ့အဖှဲ့ဖွငျ့ ဝငျရောကျစဈဆေးရာ FRC No.1 –YGN-41660 ကိုငျဆောငျသူ Mr.D Guoqiang (Passport No. E-42523300) (၂၆/၂၀၁၆) နှငျ့ FRC No.1-YGN-41660 ကိုငျဆောငျသူ Mrs.Lipeixin ( Passport No. E 72273391) (၂၀/၂၀၁၆)တို့ နှဈဦးအား တရားမဝငျ မှေးမွူထားသညျ့ လိပျကွကျတူရှေးမြားအား တှရှေိ့ရသဖွငျ့ အရေးယူနိုငျရနျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။
ဖမျးဆီးရမိသော လိပျကွကျတူရှေးမြားအား တာခြီလိတျမွို့နယျ သဈတောဦးစီးဌာနရုံးတှငျ ထိနျးသိမျး စောငျ့ရှောကျထားပွီး ဘေးမဲ့ပွနျလညျလှတျပေးသှားရနျ စီစဉျနကွေောငျး သိရသညျ။
တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျမြားအား တရားမဝငျ မှေးမွူထားသညျ့ တရုတျနိုငျငံသားနှဈဦးအား တောရိုငျး တိရစ်ဆာနျနှငျ့ သဘာဝပငျမြားကာကှယျရေး သဘာဝနယျမွမြေား ထိနျးသိမျးရေးဥပဒပေုဒျမ ၃၇(က)ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ အရေးယူနိုငျရနျ တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးက ဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။